Ndi ana-akpo di nfe na enye anyi ohere ime nnomi nke ndi ana-akpo anyi ma kekọrịta ha site na email | Esi m mac
Ndi ana-akpo ndi di nfe na enye anyi ohere ime nnomi nke ndi ana-akpo anyi ma kesara ha site na email
Ọ bụghị ndị ọrụ macOS niile bụ ndị ọrụ Apple ngwaọrụ mkpanaaka nke iOS na-achịkwa. N'ihi nke a iju mmekọrịta, ọtụtụ bụ ndị ọrụ na-adịghị eji iCloud bụghị naanị mekọrịta ha kọntaktị ma ọ bụ kalenda, ma na-mgbe niile nwere ndabere na ígwé ojii n'ihi na mgbe anyị kwesịrị mgbe niile nwere ya na aka. Ọzọkwa, a iCloud ndabere a na-eme mgbanwe ọ bụla anyị mere, ya mere data echekwara na-adịkarị oge ọ bụla n'adịghị ka ihe na-eme na mbipụta ndabere.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ onye ama ya abụghị iPhone ma ọ naghị eji mbadamba ma ọ bụ nke ị na-eji abụghị iPad, ịnwere ike iji ngwa kọntaktị Ndabere Dị Mfe, ngwa nke kwesiri ka imeputa akwukwo obula anyi na ndi ozo site na email iji chekwaa ya na ngwaọrụ ọzọ, chekwaa ya na igwe ojii ma ọ bụ naanị iji nyefee kọntaktị gị site na Mac na PC. Faịlụ kere bụ .vcf ya mere ọ dakọtara na ngwa ọ bụla na-ejikwa ozi ịntanetị ma ọ bụ kọntaktị, na-ezere nsogbu ndakọrịta.
Nanị nsogbu, dịka m kwuru n'elu, bụ na ụdị ngwa a anaghị echekwa ndabere oge ọ bụla anyị mere ndabere ka anyị nwee data emelitere oge niile, nke ga-amanye anyị iji ngwa ahụ oge anyị na-agbakwunye, gbanwee ma ọ bụ dezie kọntaktị na macOS. Ndi ana-akpo ndi di nfe nwere onu ahia nke 1,99 euro, dị na Bekee, chọrọ macOS 10.11 ma naanị 3.6 MB nọ na Mac anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka mgbe niile ka anyị na Ndi ana-akpo mma, kwesịrị ike a eruba na Automator nke mere na oge ọ bụla anyị gbanyere Mac anyị, ngwa ahụ malitere, mepụta nnomi ndabere ma zipụ data na akaụntụ email anyị ebe anyị na-ezube ịchekwa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ndi ana-akpo ndi di nfe na enye anyi ohere ime nnomi nke ndi ana-akpo anyi ma kesara ha site na email
Tinye n'ihu ọdụ ụgbọ USB na igodo ọnụọgụ na iMac gị